Corporate Kubhuroka kuburikidza Nenjodzi (sezvazviri kuitika) | Martech Zone
Corporate Blogging kuburikidza ne Njodzi (sezvazviri kuitika)
Chitatu, Nyamavhuvhu 2, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Monster inomirira sevhisi, Dreamhost, iri kurarama SaaS inotyisa izvozvi. Zvinoita kunge masimba edambudziko vese vakasarudza kuumbana muketani inoenderera yezviitiko kwavari. Ndichiri ini ndaishanda semaneja wekugadzirisa pane chimwe chivakwa chikuru chemapepanhau, ndakaudza vanhu kuti paive nezvinhu zvisingaverengeke izvo Aizoita enda zvisirizvo pakati pekuwana iwo mapeji uye kuisa bepa kunze mumugwagwa. Basa rangu raive rekugadzirisa njodzi iyi nekurwisa pese pese pese paungashaya muhurongwa. Dzimwe nguva, izvo zvinhu zvaive kunze kwekugona kwedu, hazvo! Dreamhost iri kuwana izvi izvozvi izvozvi… asi ivo vari kushingairira kutaurirana njodzi kuburikidza ne yemubatanidzwa blog (clog).
Ndinorumbidza Dreamhost nekuda kwavo nguva uye kutendeseka pane avo clog. Ini handisi mutengi (ini ndinogamuchira na Jumpline), asi iva nerukudzo rutsva kwavari mushure mekuverenga nezve 'dambudziko ravo'.
Seth Godin anonyora kuti:
Chidzidzo chekutanga: kana zvinhu zvikavhiringika, kuve pachena, kuzvitsoropodza uye kukumbira ruregerero ndiyo chete nzira yekutarisana nevatengi kana iwe uchitarisira kuti vakupe mumwe mukana.
Chidzidzo chechipiri: nyaya yako ndeye zvese zvaunazvo. Kana iwe ukatengesa iyo "yeku-kumusoro-nguva" nyaya, zvirinani pamusoro-invest mune chero zvazvinotora kuti uve nechokwadi chekuti nyaya yako ndeyechokwadi. Kana iwe uchitengesa organic yogati, bhadhara zvakanyanya kupfuura zvaunoda kuti uchengetedze huturu kunze.
Chidzidzo chechitatu: kana iwe uchifunga kuti imwe nguva mumakore gumi anotevera pachave neyakawandisa simba (hapana brownout muNew York, gasi rakachipa muOhio uye simba rakawanda pamawadhi ako matsva chero kwaunenge uri) ndinofunga urikugadzira bheji isiriyo.
Ini ndaizowedzera mapoinzi mashoma kuChidzidzo chekutanga:
Ini ndakapa inotevera chirevo kuRotohost blog (verenga kutanga):
Mimwe mhinduro kune â € OfficeHofisi yeImbaâ €. Kupa ruzivo rwakakura kwazvo zvine chekuita nekutadza kwemidziyo kunongopa mutengi chishuwo chekushamisika kuti zvimwe zvakawanda zvinokanganisa. Nekupa huwandu hwakawanda hwezvinhu zvine chekuita nekudzimwa, asi hapana zvemunhu kana ruzivo rwekufonera (kungosaina â € OfficeHofisi yeKuvakaâ ???) hazvinyengeri uye zvinoratidza kuti haudi kutarisana nenhau nemutengi wako. Izvo zvinokanganisa.
Kambani yangu yaive neyakawedzera kubhadhariswa gore rapfuura izvo zvakatitorera mazana ezviuru zvemadhora mukumutsiridza. Nekudaro, zvaigona kunge zvakatitorera mamirioni emadhora dai tanga tisina kushevedza vashandi, kuisa imwe peji rekubata (peji rekusaina rine nhamba yefoni kwataigona kusvika kune vatengi vedu pa) uye isu pachedu tibate mumwe nemumwe kukanganisa.
Kuhwanda kusayina siginecha zvisina basa kunotyisa. Ini ndaisashivirira izvi.
Sei iwe uchiblogi?
Microsoft Inovhura MySpace… Spaces… er… Error